အိပ်မက်အိမ်: အိမ်မက်မက်သူများသို့အိတ်ဖွင့် ပေးစာ
အိမ်မက်မက်သူများသို့အိတ်ဖွင့် ပေးစာ
အိမ်မက်အိမ်ကို စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ တဲ့အချိန်တို အတွင်းမှာ မထင်မှတ်ထားပဲ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ရေးသားကြလေသော မိတ်ဆွေတို့ ကြောင့့် စမ်းသပ်ဆဲ ကာလအတွင်းမှာပဲ အတော်လေး တိုးတက်မှု လက္ခဏာ ပြခဲ့ ပါတယ်။ ရှုထောင့်အတော်လေး စုံလင်အောင်လည်း မိတ်ဆွေတို့ဝိုင်းဝန်းရေး သားခဲ့ ကြလို့ ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း မကြာမှီ လာမည် ဟု သတင်းပေးထား ကြပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာက နိုင်ငံအများစု ရဲ့စာမေးပွဲများနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်လည်း သူငယ်ချင်း တစ်ချို့ ဆန္ဒ ရှိရက်နှင့်မပါဝင်နိုင်ကြပါ။ စိတ်ချပါ မိတ်ဆွေတို့အိမ်မက်အိမ် ရဲ့ဖိတ်ကြားမှု ရထားတဲ့အတွက် ဘယ်အချိန်ရေးရေး ရေးလို့ရပါတယ်။
အိမ်မက်အိမ် ကို စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ တာ ရှေးဦးဖွဲ့ စည်းသူ (၃) ဦးနဲ့စတင်ခဲ့ တာပါ။ ဒါကို ကိုဆိုးပေကြီး ရေးခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒီ (၃) ယောက်ကပဲ အိမ်မက်အိမ် ရဲ့ရေးသားမှု အချို့ ကို လိုအပ်သလို အလှည့်ကြ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ကြမှာပါ။ မိတ်ဆွေ တို့ ကို တစ်ခုတော့တောင်းပန်ချင် ပါတယ်။ အိမ်မက်အိမ် ရဲ့Post List ထဲက Publish မလုပ်ပဲ ထားတဲ့Draft အချို့ ကို အချိန်(၁) ပါတ်အတွင်း Publish မလုပ်ခဲ့ ရင် အိမ်မက်အိမ် အနေနဲ့Publish ဖြစ်စေ Delete ဖြစ်စေ လိုသလို ဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။ ဒါကလည်း အိမ်မက်အိမ် ရဲ့Post List မှာ မထင်မှတ်ပဲ Draft ဖောင်းပွမှု ဖြစ်ပေါ် မသွားရလေအောင် ကြိုတင်စီစဉ် ရခြင်းပါ။
အိမ်မက်အိမ် ရဲ့စာရေးသူများ အနေနဲ့တပါးသူတို့ ရဲ့Personal အပေါ် သင့် တော်သော နာမ်စား သုံးစွဲမှုများသာ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ရေးကြစို့ကျုပ်က " ဆိုးပေ ကို သကောင့် သား မောင်ဆိုးပေ" လို့ ရေးချင်ရေးမယ်။ " နွေလှိုင်ဿုန်း ကို ခိုချေး(ချီး) " လို့ရေးချင်ရေးမယ်။ သူတို့ ကလည်း " ကျုပ်ကို မြွေဆိုး မိုးစွေ " လို့ခေါ်ချင်ခေါ်မယ်။ ဒါမိတ်ဆွေ တွေလေ . . . ( ပြုတ်မကျအောင် ကူညီတာ ) ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ တခြားလူတွေ အပေါ်မှာ တော့Personal လေးစားမှု ထားရလိမ့် မယ်။
ဘာကြောင့်ကျုပ်က ဒါကိုပြောတာလဲ ?
ပြောရရင်တော့အများကြီးပါ။ အဓိက ပြောချင်တာက အိမ်မက်အိမ် ရဲ့ရှေးဦး တည်ထောင်သူ (၃) ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မိခင်တစ်ယောက်လို မှတ်ယူကြ တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ယနေ့မြန်မာပြည်တွင်းက သတင်းစာတွေမှာ ကလောင်လက်စွမ်းပြနေကြလေသော သက်ဆိုင်ရာ ပြန်ကြားရေး ဌာနများရဲ့အယ်ဒီတာကြီးများ ၊ သူတို့ ရဲ့Personal တိုက်ခိုက်မှု တွေလို ( မိုးပေါ်က စုကြည် ဆိုတာမျိုး ) ကျုပ်တို့မိတ်ဆွေတွေကို ပြန်လည် ချေပလို့ရိုင်းစိုင်းစွာ မရေးသားစေချင်ဘူး။
ကုန်ကုန်ပြောမယ် ဗျာ ၊၊
ဒီလူတွေ ကို လမ်းမှာတွေ့ ရင် သတ်ပြစ်ချင်လောက်အောင် မုန်တီးနေ ဦးတော့ကျုပ်သူတို့အမည်တွေရဲ့အရှေ့ မှာ " ဦး" တပ်ပြီးခေါ်မှာပါ။
မိတ်ဆွေ တို့ လည်း Personal လေးစားမှု ထားပေးဖို့အိမ်မက်အိမ် ရဲ့ကိုယ်စား တောင်းဆိုပါရစေ။
ကျုပ်တို့ တွေက လူငယ်လေးတွေပါ ၊ ဒါပေမယ့်တရား မငယ်စေရဘူး။
" ဘယ်သူ တရားပျက်ပျက် ၊ ကိုယ် မပျက်စေ နဲ့ ။ "
အိမ်မက်အိမ် က သဘောထား မသေးသိမ် စေရပါဘူး။ ရေးချင်ရာရေး ၊ မဆဲကြေးပေါ့ ။
Labels: မိုးစွေ, အိပ်မက်အိမ်